Dhismaha - Joornaalka Naqshadeynta
Talaado 23 Bisha Labaad 2021
Dukaanka Buugta, Suuqa Wax Laga Iibsado
Isniin 22 Bisha Labaad 2021
Dukaanka Buugta, Suuqa Wax Laga Iibsado Naqshadeynta Jato Design waxaa loo xilsaaray inay maktabad dhaqameed u beddeleyso goob firfircoon, oo adeegsi badan leh - ma aha oo kaliya suuq dukaameysi laakiin sidoo kale xarun dhaqan oo loogu talagalay munaasabadaha buugga buugaagta iyo waxyaabo kaloo badan. Xaruntu waa “geesinimada” meesha ay booqdayaashu ugu guuraan alwaax alwaax leh oo alwaax leh oo lagu xoojiyay naqshado layaab leh. Koomaha-sida laambada ah ayaa loox ka soo laalaadaa saqafka halka jaranjarooyinka loo adeegsado sidii goobo wadaag ah oo ku dhiirrigeliya booqdayaasha inay liishaan oo wax akhriyaan inta ay fadhiyaan jaranjarada.
Naqshadeynta Hoteelka Gudaha
Axad 21 Bisha Labaad 2021
Naqshadeynta Hoteelka Gudaha Weelka ayaa xamuul sidda meelo. Hoteelku wuxuu siiyaa meelo nasasho loogu talagalay socotada. Meel ku nasashada ku meel gaarka ah waa waxa ay wadaagaan. Taasi waa sababta u adeegso "weelka" sidii fikradda hudheelka. Hoteelku maahan oo keliya meel lagu nasto, laakiin sidoo kale waa meel leh shaqsiyad. Qol kastaa wuxuu leeyahay muuqaalkiisa iyo shaqsiyaddiisa. Sidaa darteed u abuuro sideed qaybood oo kala duwan sida soo socota: Indulge, Evolve, WabiSabi, Shine Ubax, Pantone, Fantasy, Journey iyo Ballerina. Guriga xasilloonidu maahan oo keliya meel lagu nasto, laakiin sidoo kale waxay xarun u tahay ruuxaaga.
Naqshadeynta Xafiiska Gudaha
Sabti 20 Bisha Labaad 2021
Naqshadeynta Xafiiska Gudaha Had iyo jeer waxaa jira goleyaal saxeex oo aad u tiro badan oo ku yaal dariiqyo taagan, toosan iyo kuwa dambe oo jidadka mara oo horjoogsada wejiga dhismaha ee dhabta ah. Tani waxay ku boorineysaa tixgelinta sida dib-u-qeexida looxyada calaamadaha si loo wanaajiyo loona habeeyo saameynta ay keeneen qodobbada qurxinta ee bannaanka. Barta naqshadaynta gudaha ayaa ah inay tirtirato qaabkii hore. Nalalka dabiiciga ah ayaa la soo saaray. Katiin waxaa lagu dhisay meel sare. Halka jaranjarada wax laga beddelay. Beddelka halka jaranjarada ay jarteen waqtiga dhaqdhaqaaqa toosan. Tani waxay abuurtaa suurtagal cusub oo ka baxsan xadka hore.
Jimco 19 Bisha Labaad 2021
Salon Timaha Saqafyada timaha waxay ku saleysan yihiin joomatari isku dhafan midab madow, caddaan iyo cawlan. Farsamooyinka timaha-goynta waxaa loo tarjumay isu-tagga qaybaha farshaxanimada. Qaabka saddex-xagalka ah wuxuu qaabeeyaa dhismooyinka shaqeynaya iyo diyaaradda laga soo bilaabo saqafka ilaa dabaqyada iyada oo loo marayo falalka goynta, goynta, iyo tolidda. Alwaaxda iftiinka ee ku dhegan xariiqda kala qeybinta waxay gacan ka geysataa suumanka iftiinka badan, ee u adeega sidii iftiinka dheeriga ah iyadoo la xalinaayo xaalada saqafka hoose. Waxay fidiyaan oo ay iska dhigayaan milicsiga muraayadda weyn, iyagoo si xor ah ugu xiraya inta u dhexeysa diyaaradaha iyo saddex-cabbirka.
Beerta Khaaska Ah
Khamiis 18 Bisha Labaad 2021
Beerta Khaaska Ah Caqabadda ayaa ka koobneyd casriyeynta guri duug ah oo dalka u rogaya oo u rogaya meel nabad ah oo deggan, oo si buuxda uga shaqeysa dhismaha iyo muuqaalka muuqaalka. Wajigii hore ayaa la cusbooneysiiyay, shaqadii madaniga ahaydna waxaa lagu sameeyay dhaqaalihii iyo barkadda dabbaasha iyo darbiyada dayactirka ayaa la sameeyay, iyada oo la abuurayo alwaaxyo cusub oo loo yaqaan 'argeega', darbiyada iyo dayrarka. Beeraha, waraabinta iyo kaydka biyaha, sidoo kale hillaaca, alaabta guryaha iyo waxyaabaha kale ee la rakibay ayaa iyagana sifiican looga fahmay.
inci Ceramik Isniin 1 Bisha Saddexaad
Prisma Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Axad 28 Bisha Labaad
Baan Armaajo Qado Loo Sameeyay Sabti 27 Bisha Labaad
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta Isniin 1 Bisha Saddexaad
Naqshadeynta naqshadda maalinta Axad 28 Bisha Labaad
Naqshadeynta maalinta Sabti 27 Bisha Labaad
Naqshadeeyaha maalinta Jimco 26 Bisha Labaad
Naqshadeynta kooxda maalinta Khamiis 25 Bisha Labaad
Aagagga Guud Ee Caanka Ahi Dukaanka Buugta, Suuqa Wax Laga Iibsado Naqshadeynta Hoteelka Gudaha Naqshadeynta Xafiiska Gudaha Salon Timaha Beerta Khaaska Ah